Baaq: Badbaadinta Puntland | Abdirahman O. Warsame
← My candidacy
Yet Another Damn DAM for Somalia →
Baaq: Badbaadinta Puntland
Puntland oo ahayd bud-dhigihii nidaamka Federaalka oo lagu badbaadinayey xal-u-helidda soo-celinta qarannimadii Soomaaliyeed ee burburtay ayaa hadda la muuqatay inay ku sii siqayso inay burburkaas kaalinteeda saanyato. Waxaan muuqan dadaal badan oo dadkeedu arrintaas kaga badbaadinayo.
Taariikhda siyaasadeed oo Puntland soo martay xilli nabadeed iyo mid colaadeedba waynu ka dheregsan nahay. Sidoo kale waxaynu ka dheregsan nahay is-mari waaga hadda taagan biyo-dhiggiisu wuxuu noqon doono.
Iyadoo aan tebayo inay jariimad tahay in aammus arrintaas lagu maammuuso ayaan waxaan jeclahay inaan kaalintayda shakhsiyadeed ka dhawaaqo xasaradda hulaaqaysa. Waxaan jeclahay inaan baaqaan u tebiyo afar gaaf oo Puntland oo Puntland saaxaddeeda siyaasadeed iyo dhaqan la tuhmayo inay kaalin ku yeelan karaan. Baaqaani wuxuu farriin u dirayaa afartaas gaaf oo kala ah:
Posted by abdirahman O Warsame on January 5, 2013 in Puntland, Qarannimo, Somali Diaspora, Somali News, Somalia
2 responses to “Baaq: Badbaadinta Puntland”
Waxaan filaya in ay qof kasta oo Somali ah qabato in uu Nabadda u ololayo inta kale ku boorriyo. Puntland marxalado kala duwan ayey soo martay. Intii badnayd waxay ahaayeen kuwo dhib badan. Maantayna waxaa taagan is-mari.waa siyaasad. Waxaanse ku kalsoonahay shacabkeeda oo aad nabadda ugu hiiliya. Rajadaydu waa in mashaqadanna laga gudbi doono.
Waxaan filaya in jawaab dadka qancisa loo heli doono: Haddii maamulka hadda jiraa dhammaystiri waayo “roadmapka” marka la gaaro January 2014, maxaa la yeelaya? Ma muddo kordhin kale? Mise nidaamkii qabaliga ahaa ayaa lagu noqonayaa???!!!
Waxaan filayaa warkii adiga ayaa dhammeeyey. Haddaan isku dayo inaan ra’yi ka dhiibto su’aalaha aad qormadaada ku soo gunaanaddey. Dadka reer Puntland oo dhan iyo intii samaha jecel oo dhan bay u taallaa inay ka hor tag ka sameeyaan inayan dhicin guho siyaasadeed oo Puntland ku shalwato. Si taas looga hor tago in la isugu tago shacab iyo maamulba bay u baahan tahay. Nidaamka qabaliga ah eebbe ayaa ina baday. Waxaynu overnight kaga xiriir furan karno ma ahan. Old norms die hard. Mar kasta tixgelinta luqadda bulshada badankeedu ku hadasho in tixgelinteeda la siiyo waa lama huraan. Taas macneheedu ma ahan inaan la isku deyin in ulo booc ah loogu tukubo sidii loo baddali lahaa. Waa arrin Soomaali oo dhan haysata oo sigaysa inay qarannimadeedii ku weydo.